Fifandraisana amin'ny marketing: Fialam-boly amin'ny horonan-tsary | Martech Zone
Fifandraisana amin'ny marketing: Mahafinaritra amin'ny horonan-tsary
Alatsinainy 2 Febroary 2009 Talata, Oktobra 6, 2020 Douglas Karr
Ny fananganana sehatra ho an'ny orinasa hitorahana bilaogy dia fahombiazana fotsiny raha toa ka mihinana ilay sehatra ireo mpanjifa ireo. Fantatray fa hahomby amin'ny fahazoana ny tamberim-bola ny mpanjifanay raha toa ka azonay atao ny mamorona sy mizara lahatsoratra bebe kokoa momba ny vokatra sy serivisin'izy ireo.
Ny fampiasana sehatra dia mitaky ny fananana rindrambaiko ho orinasam-panompoana antoka hiasana amin'ny fampiasana. Avy amin'ny onboarding amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny fampiasana, sehatra iray dia tokony hanamarina raha te hampiasa tanteraka ny sehatra ianao. Tsotra kely izany… ny fampiasana dia miteraka valiny, ny valiny dia mitarika fiverenana amin'ny fampiasam-bola, ary ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola dia mitarika fanavaozana sy fanitarana ny mpanjifa.
Rehefa nahita fihenan-tsakafo izahay, dia namorona famoronana mailaka iray izay nahitana horonan-tsary tsy dia novokarina sy tsy dia tsara loatra hisarika ny sain'ny mpanjifanay.
Raha hamela ny fanetren-tenanao eo am-baravarana ianao, dia azonao atao ihany koa ny mandefa izany. Izahay dia nanao fanentanana fampidirana an-tsehatra mahery vaika ho an'ny mpanjifa izay tsy ampy ny famokarana atiny.
Navoakanay avokoa ny fijanonana rehetra ary nifalifaly izahay tamin'ny horonan-tsary vitsivitsy ho an'ny mpanjifanay. Noraisim-peo izy ireo tamin'ny alàlan'ny iPhone, iMovie, ary ny làlam-peo mahazatra. Novokarinay izy ireo tao anatin'ny iray andro ary nanosika azy ireo hivoaka!
Lahatsary mahafinaritra momba ny marketing: Alefaso azafady!
Rehefa afaka herinandro dia tsara ny valiny ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifanay, ka nandefa mailaka azy ireo izahay androany hisaorana azy ireo.
Lahatsary mahafinaritra momba ny varotra: nandefa ianao, voahary i Doug!
Ary mazava ho azy, ireo mpanjifanay izay tsy nahatratra ny takelaka dia nahazo hafatra hafa.
Lahatsary mahafinaritra momba ny marketing: Tsy nandefa ianao, TSY voavonjy i Doug!
Fampahafantarana: tompon-trano aho ary mpiara-manorina ny Compendium Blogware.
Tags: fitorahana bilaogyfamintinanaiPhonemotivationsaasfandraisana an-tsarydia videohoronan-tsary
Mampifandray ny Salesforce sy Facebook i Appirio
Febroary 3, 2009 amin'ny 6:45 PM
Febroary 3, 2009 amin'ny 6:49 PM
Ary miala tsiny amin'ny fanakatonana :), anisan'ireo tokony hanoratra aho Sigma Micro's Ecommerce Gurus – bilaogy Compendium ary mahamenatra fa tsy mbola!.
Febroary 3, 2009 amin'ny 8:49 PM
Inona no hatao mba hahatonga anao hamoaka lahatsoratra sasany? Ny tiako holazaina dia amin-kitsimpo - tiako ny hevitrao!